के शाहरुख, सल्मान र आमिर सँगै फिल्म खेल्दैछन्? – जीवनशैली
Home /मनाेरञ्जन/के शाहरुख, सल्मान र आमिर सँगै फिल्म खेल्दैछन्?
बलिउडका तीन खान साथमा फिल्म खेलेको हेर्ने फ्यानहरूको वर्षौंदेखिको सपना हो। यो सपना छिट्टै नै पूरा हुन सक्छ किनकि उनीहरूले यसबारेमा विचार गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
एउटा खबरअनुसार शाहरुख, सलमान र आमिर सँगै स्क्रिन शेयर विषयमा सोचिरहेका छन्। टाइम्स आफ इन्डियका अनुसार हालै तीन खानले शारुखको घरमा भेटघाट गरेका थिए। समाचारमा जनाइएअनुसार उक्त भेटघाट कुनै नयाँ प्रोजेक्टका लागि थियो।
तीनै खान एकैसाथ देखिँदा केही कमाल पनि हुन सक्छ। शाहरुख र सलमानले करण अर्जुन र कुछकुछ होता है जस्ता फिल्ममा काम गरेका थिए। त्यस्तै, सलमान र आमिरले अंदाज अपना अपना मा काम गरेका थिए। तर आमिर र शाहरुखले अहिलेसम्म साथमा कुनै पनि फिल्ममा काम गरेका छैनन्।
तीन खानका अघिल्ला फिल्म
तीन खानका आउँदै गरेका फिल्मको बारेमा कुरा गर्दा सलमानको आउँदो ईदमा भारत आउँदै छ। उक्त फिल्ममा उनी जवानदेखि बुढोसम्म ५ गेटआपमा देखिँदै छन्। भारतमा कटरिना क्याफ तबु दिशा पाटनी र सुनिल ग्रोवर पनि लिड रोलमा देखिँदै छन्। त्यस्तै सलमानको अर्को फिल्म दबंग ३ पनि यही साल रिलिज हुन सक्छ।
यता आमिर आइकोनिक हलिउड फिल्म फरेस्ट गम्पको रिमेकमा काम गर्दैछन्। आमिरले उक्त प्रोजेक्टको घोषण आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा बताएका थिए। यो फिल्मको नाम लाल सिंह चड्ढा राखिएको छ।
लगातार फ्लप फिल्म दिइरहेका शाहरुखको कुनै नयाँ फिल्म छैन। अहिलेसम्म उनले कुनै नयाँ प्रोजेक्टका बारेमा उनले घोषणा गरेका पनि छैनन्। चीनमा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा शाहरुखले मैले ‘अघिल्लो फिल्मका बारेमा कुनै निर्णयको लिएको छैन। म केही महिना आरम गर्ने छु र त्यसपछि जे मनमा आउँछ त्यही गर्ने कोशिष गर्ने छु।‘
विज्ञ भन्छन् : दशौँ वर्षसम्म परकम्पन आइरहन सक्छन्
TAGS: आमिर खान शारुख खान सलमान खान